I-Alpha GPC powder (28319-77-9) hplc≥98% | I-AASraw
/ iimveliso / I-Nootropics powder / Alpha GPC umgubo
Akukho kalo SKU: 28319-77-9. Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Alpha GPC powder (28319-77-9), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Alpha GPC powder, ekwabizwa ngokuba yi-L-Alpha glycerylphosphorylcholine okanye i-choline alfoscerate, yi-nootropic yendalo esebenza zombini iyodwa kwaye idibene nezinye ii-nootropics. Ngokwendalo ikhona emzimbeni ngesixa esincinci kwaye iveliswa njengentengiso yesicoci se-lecithin yesoya…
Ividiyo ye-Alpha GPC ye powder
I-Alpha GPC yepowder ezisemqoka
igama: Alpha GPC powder
Ifomula yeMolekyuli: C8H20NO6P
Ubunzima Ezinto: 257.22
I-Alpha GPC ipowder ekuphuculeni umsebenzi wengqondo kunye nomjikelezo owongezelelweyo
I-Raw Alpha GPC powder, i-Alpha-glycerylphosphorylcholine, i-choline alfoscerate
I-Raw Alpha GPC powder
Ophakathi kwe-phospholipid metabolism, i-Raw Alpha GPC ipowder isebenza ngokukhawuleza kwaye inokuthenjwa, ngokuyinhloko ngokuhambisa i-choline ebalulekileyo kwingqondo.
I-Alpha GPC powder inempawu eziphawulekayo ze-nootropic, kuquka ukuphucula imemori kunye nokukhusela ukuguga kwengqondo. Uvavanyo olunzulu lweeklinikhi ezibandakanya amawaka athatha inxaxheba libonise ukuba lonyango olusebenzayo lokulahleka kweememori ezinxulumene neminyaka ezinxulumene neentlobo eziphazamisayo, eziquka isifo se-Alzheimer, isifo sengqondo se-Alzheimer, kunye nesifo. Kananjalo ine-neuroprotective anti-aging ability kunye neziphumo zibonisa ukuba kunokunceda ekunyangeni kokuxhalabisa.
Ingenazo iinzuzo ze-nootropic ngokunjalo, kubandakanye nokukwazi ukuphucula impilo yeembrane ze-cell kunye nokukhuthaza ukuphucula ngokukhawuleza emva kokusebenza komzimba. Ucwaningo oluphambili lubonisa ukuba lusetyenziswa njenge-dopaminergic, ekukhuthazeni ukukhululwa kwe-hormone dopamine, oku kuthetha ukuba inokusetyenziswa njengonyango lweemeko ezinokwenziwa kwegazi ezifana nesifo se-Parkinson kwaye ingaba nesimo sokuphucula imizwa.
Kodwa kubasebenzisi abaninzi be-nootropic, amandla okwenene e-Alpha GPC powder aphantsi kwipropati zayo ezinokuthi zithathwe ngokuhlanganisana nezinye izongezo. I-choline eyongezelelweyo i-Raw Alpha GPC powder eyenza ufumaneke kwingqondo ingakwazi ukukhulisa kakhulu imiphumo yokuphuculwa kwengqondo yee-racetam. Inokuthintela intloko encinci kodwa inomsindo ephakathi kweminye imiphumo emibi ehambelana ne-racetam nootropics.
I-Alpha GPC ipowder ilawulwa eYurophu, apho imiselwe khona unyango lwe-Alzheimer's disease kwaye ithengiswe phantsi kwegama lomnxeba iGliatilin no-Delecit. E-US kuthathwa njengesongezelelo sokutya kwaye iyafumaneka ngaphandle kwemithi.
Umlinganiselo osemgangathweni we-alpha-GPC ngu-300-600 mg, ngokubhekiselele kwiiyithingi eziqhelekileyo zeelayibhile. Eli dosi lihambelana nophando usebenzisa i-alpha-GPC ukuphucula amandla okuphuma (600 mg) kunye nezifundo ezimbini eziphawula ukwanda kwe-hormone yokukhushulwa, kwaye mhlawumbi i-dose efanelekileyo ukuthatha abadlali.
Ukusetyenziswa kwe-alpha-GPC ekunciphiseni iimpawu zokuncipha kwengqondo, phantse zonke izifundo zisebenzisa umyinge we-1,200 mg imihla ngemihla, zahlula ngamanani amathathu we-400 mg. Akuqinisekanga ukuba amayeza amancinci aya kunceda njani ukuqonda, kodwa i-1,200 mg ibonakala ihambelana ngokuncedisa.
Uphononongo lubonisa ukuba iziphumo ze-alpha-GPC ngomlomo wokungenisa umlenze kwi-300-600 mg / kg, ekulinganiselwe umthamo we-48-96 mg / kg (kunye ne-150lb yomntu, i-3,272-6,545 mg imihla ngemihla).
Isexwayiso kwi-Alpha GPC powder
Ngaphandle kokuba ungumthombo wemvelo we-nutrient choline, ukuxhaswa kwimo engagxininisi kungabangela igalelo le-Alpha GPC. Enye yeempembelelo eziqhelekileyo ze-Alpha GPC i-headache okanye isisu, esivame ukuvelisa i-choline eninzi kwingqondo. Abanye abantu, njenge-"biohacker" ethandwayo, uDave Asprey, bathetha ukuba baphakamileyo kwi-choline baze ngoko bafumane intloko xa besenza ngaphezulu.
Ezinye iimpembelelo ze-Raw Alpha GPC powder ziquka izinto ezifana nokudideka, i-erythema, kunye nokulala (ngenxa yokuvuselela). Nangona kunjalo, nangona kunokwenzeka iziphumo ezibi, kukho ubungqina bokuba le notropic ixhomekeke kakuhle kwizinga eliphezulu. I-LD50 (imilinganiselo esetyenzisiweyo ukubona ukuba iyiphi imilinganiselo ebulala i-50% yabemi) ibonisa umthamo we-10k mg / kg (elilingana ne-6800 gram yomntu we-150 lb) kwierati.
Olunye uphando olunengqiqo lubonisa ukuba "akukho nto yabona izinga elichaphazelayo" nomlinganiselo olingana no-1636 mg kumntu we-150 lb.
Nangona eyaziwa ngokuqhelekileyo njengento engabonakaliyo, abanye abantu baxela ukuvuselela kwengqondo kunye ne-alpha-GPC.
Kungaba luqili ukuthatha i-alpha-GPC kunye nama-fatty acid acids for absorption (ngenxa yokuba yi-phospholipid), nangona oku kungabonakali kuyimfuneko epheleleyo.
I-al-glycerylphosphorylcholine (ifutshane kwi-Alpha-GPC ngokuqhelekileyo, eyaziwayo njenge-choline alphoscerate okanye i-glycerophosphocholine) yi-choline equkethe i-phospholipid kunye ne-lecithin yemetabolism okanye nje i-molecule ye-lecithin kunye ne-acids e-fatty acids. , kwaye yaziwa ngokuba yinto ephambili kwi-acetylcholine kunye ne-phosphatidylcholine emzimbeni emva kokungenisa.
I-Alpha-GPC ifumaneka njengento eyenziwa ngokwemvelo yemveliso ebomvu kunye nezicubu zomzimba kodwa inxalenye ininzi ayinqongqo kwimilinganiselo ebonakalayo kwimvelo. Izibonelelo ezininzi eziqukethe i-Alpha-GPC zenziwe ngokudibanisa, apho zingenziwa nge-enzymatic kusuka kwiqanda okanye i-lecithin ye-soy. Ngenxa yolu xwebhu kunye nomthombo, ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba yi-semisynthetic derivative ye-lecithin.
I-Alpha GPC ipowder iyakwandisa ngokukhawuleza ukuhlanganiswa kwe-acetylcholine kunye neurotransmission kwingqondo, okuqhelekileyo imizuzu ye-20-30 emva kokusetyenziswa komlomo. Abasebenzisi banokulindela ukuba banyuke ukunyuka kwengqondo, ukugxininisa nokugxilwa kwengqondo kule xesha. Ukusetyenziswa okuhambelanayo ngokubambisana nokutya okunengqiqo kunye nokusebenza komsebenzi kuya kufumana usebenze ngokugcwele kunye nemiphumo yokuphuculwa kwengqondo yeRaw Alpha GPC powder ngaphakathi kweeyure zokuqala ze-2 zokusetyenziswa.
I-Alpha GPC Powula
I-Alpha GPC yePowder Marketing
Indlela yokuthenga i-Alpha GPC powder evela kwi-AASraw